मिसन agitator - को GTA5मा घाँस संग एक क्षेत्र मा खोजहरू र stash
खेल GTA5तपाईँले खेल मार्फत उन्नति र शहर र यसको environs अन्वेषण रूपमा प्रदर्शन छौँ भनेर थप दुई भन्दा सय फरक मिशन छ। स्वाभाविक, अलग तपाईं खेल पूरा गर्न प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ कि 69 कहानी मिशन छन्। तर, तिनीहरूलाई बाहेक र सन्दर्भ द्वारा पनि वर्तमान को GAC-5 मा, जो वैकल्पिक छौं। तथापि, तिनीहरूलाई तपाईं पैसा, साथै केही बोनस प्राप्त र अन्तमा खेल पूरा गर्न सक्नुहुन्छ 100%, यो असम्भव तपाईं मात्र कहानी समाप्त यदि प्रदर्शन हो। त्यसैले, तपाईं अधिकतम सफलता हासिल गर्न, कुनै पनि कार्य मा लिनुपर्छ। छुट्टाछुट्टै यो तपाईं सडकमा मानिसहरूलाई दिनेछु कि, अपरिचित देखि कार्यहरू आवंटित गर्न आवश्यक छ। अक्सर, खेलाडीहरूलाई stash घाँस संग GTA5मा, यो खोज समस्या धेरै गराउँछ किनभने रुचि। यस लेखमा तपाईं दिन्छ कि agitator बैरी यो काम बारे सबै सिक्न हुनेछ।
Agitator र माइकल
तपाईं राम्ररी थाह छ, प्रत्येक अतिरिक्त काम आफ्नो निपटान मा, तीन अलग अलग वर्ण मा गर्न सकिन्छ उपलब्ध छैन। अरुले प्रत्येक त्यहि traversed गर्दा केही खोजहरू, विशिष्ट वर्ण लागि उपलब्ध छन्। तर agitator संग खोज - एकदम फरक। त्यसैले, वर्ग मा तपाईं पाउनुहुनेछ एक बुद्धिमान व्यक्ति जो गाँजा कानूनी रूप गर्न हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ बैरी को नाम, द्वारा। तपाईं GTA5मा घाँस संग गुँडमा अण्डा किनभने माइकल को jamb कस पछि काम यस भागमा उल्लेख नगर्ने अनुमान हुन सक्छ, उहाँले बैरी, विभ्रम जोडतोडले सुझाव। यो मिशन मा आफ्नो लक्ष्य - minigun देखि परदेशी गोली, तिनीहरूले निरन्तर देखा र आफ्नो बन्दुक संग आगो खोल्न नजिक प्राप्त गर्न प्रयास गर्नेछ। तपाईं एक प्राप्त हुनेछ सुन पदक तपाईं दस सेकेन्डमा सात newcomers मार्न सक्षम छन्, यदि तपाईं एक न्यूनतम गर्न क्षति हुनेछ भने, काम को लागि, र। यो GTA5मा घाँस संग stash लुकेको लाग््छ सजिलो भएको थियो, तर केही यसको बारेमा गरेको गरिएको छ।
Agitator र ट्रेवर
तुरुन्तै यो GTA5मा घाँस संग गुँड अन्डा मिशन को अर्को भाग मा हुनेछ, र हालसम्म तपाईं नै दृश्य बारे मा जाने छ भन्नुपर्छ, यस समय मुख्य पात्र ट्रेवर छ, यो अनन्त बारूद संग एक बन्दूक छ, र आफ्नो विरोधीको तिनीहरूले परदेशी र जोकर छैन। यो तथ्यलाई ध्यान क्षेत्र नयाँ जोकर सिर्जना गर्नेछ जो चार रथहरूलाई, आउनेछ महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले तपाईं पहिलो स्थानमा तिनीहरूलाई नष्ट गर्न आवश्यक छ। तपाईं सुन पदक लागि लक्ष्य भने, उनीहरूले कुनै पनि जोकर जारी छैन रूपमा सबै ट्रक माथि झटका गर्न समय आवश्यक छ। पनि जोकर समय समयमा नृत्य सुरु गर्न रोक्न भनेर याद गर्नुहोस्। तपाईं सुन पदक प्राप्त गर्न नृत्य समयमा छ जोकर मार्न आवश्यक छ। कि पछि मारिजुआना अघिल्लो दुई वर्ण रूपमा लिन गर्दैन छ जो फ्रेंकलिन, सबै आउन, र अन्तमा तपाईं कहाँ घाँस संग GTA5stash बारे आश्चर्य छ?
Agitator र फ्रेंकलिन
"घाँस संग Zanachka" GTA5मा - त्यसैले, फ्रेंकलिन फरक मिसन हुनेछ। यो तपाईं उहाँलाई विभ्रम आफ्नो एक स्कूल तर एक शब्द धूम्रपान गरेपछि सबै नै agitator बैरी दिनेछु। त्यसपछि तपाईं लुकेको र लागूपदार्थ छन् जो दुई वाहन, स्थान एसएमएस हुनेछ - बैरी यसलाई स्पष्ट पर्याप्त छैन स्टक छ देखि, घाँस आफ्नो stash पाउन तपाईं बताउँछ। यहाँ पहिले नै तपाईं GTA5मा घाँस जहाँ फेला पार्न सोच्न छैन - तपाईं अर्को प्रश्न हो। तपाईं कसरी बैरी घर विद्यालय छुटाउन बुझ्न आवश्यक छ।
पहिलो कार Murrieta हाइट्स छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो खोज संग कुनै पनि समस्या हुन असम्भाव्य छन्। तपाईं एक पिक-अप फेला गर्दा बैरी उहाँले चाहन्थे छ भनेर भन्नेछु, त्यसैले तपाईं प्रहरी संग मुठभेड़ों हुँदैन। एक सुन पदक संग समाप्त यो मिशन गर्न, तपाईं एक पिकअप ट्रक तपाईं तारा को कुनै पनि धंधा छैन भनेर, दुई मिनेट र चालीस पाँच सेकेन्ड लागि बैरी घरमा उद्धार गर्न आवश्यक हुनेछ। तपाईं अझै पनि याद भने - लुकाउन बन्द आएको, बाहिर पर्खनुहोस् र आफ्नो बाटो मा जानुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, पहिलो कार तपाईं कुनै पनि समस्या उत्पन्न छैन, तपाईं प्रहरी zasekut के लागि स्थायी चासो बाहेक। तर दोस्रो मिसिन संग एक सानो थप जटिल हुनेछ। जब तपाईं एक landfill मा फेला पार्न, यो छैन इन्जिन चलिरहेको छ भनेर बाहिर जान्छ। बैरी तथापि, stash एक कार लिइएका थियो जोर, कि छ, यो असम्भव प्राप्त र आफ्नो शक्ति ले छ। त्यसैले तपाईं नै डम्प तान्नु ट्रक मा, हेर्न कार हुक र सडक मारा आवश्यक छ। तपाईं काम गर्न चाहनुहुन्छ र सुन पदक प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं यो हुनु पर्छ प्रयास छ। सुरुमा, यो समय तपाईं लगभग आधा समय दिइएको - मात्र एक मिनेट र तीस सेकेन्ड। दोश्रो, तपाईं मिसिन को तान्नु ट्रक देखि पृथक भन्ने तथ्यलाई जोगिन सक्दैन, र यो सडक कुनै पनि बेवस्ताई सक्छ। तदनुसार, धेरै ध्यान दिएर ड्राइव, तर तपाईं अन्यथा आफ्नो सबै प्रयासमा अर्थहीन हुनेछ, निर्धारित समय भित्र राख्न आवश्यक छ कि भूल छैन।
GTA: एसए - मिसिन र आफ्नो विविधताको
तपाईं वा अन्य व्यक्ति गर्न क्षति छ कि छैन भनेर म कसरी थाह
यी Cossack परीक्षक (फोटो)
के कारहरुको लागि प्राइमर हुन्छ? प्रकार र प्राइमरों को वर्गीकरण को अवलोकन
Leaps र सीमा द्वारा डोनटहरू: को नुस्खा (फोटो संग)